यस वर्ष सार्वजनिक उत्कृष्ट क्यामरा भएका १० चर्चित स्मार्टफोन
पुस ८ | एजेन्सी
विगतका वर्षहरु भन्दा यस वर्ष बजारमा उत्कृष्ट स्मार्टफोन सार्वजनिक भए । कुनैको क्यामरा
पिक्सेल राम्रो छ, कुनैमा शक्तिशाली सेन्सर राखिएका छ भने कुनैमा एड्भान्स अटोफोकस फिचर राखिएका छन् ।
यदि तपाईंलाई फोटो खिच्न मनपर्छ र राम्रो क्यामरा भएको स्मार्टफोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सन् २०१६ मा बजारमा भित्र्याइएका १० उत्कृष्ट क्यामरा भएका स्मार्टफोनबारे जानकारी दिइएको छ ।
१. एप्पल आइफोन सेभेन प्लसः
एप्पल आइफोन सेभेन पहिलो आइफोन हो जसको पछाडि पट्टी ड्यूल १२ मेगापिक्सल क्यामरा मोड्युल राखिएको छ । एउटा १२ मेगापिक्सेल मोड्युलमा वाइड एंगल लेन्स छ भने अर्कोमा टेलिफोटो जूम राखिएको छ । जसका कारण यसबाट खिचिएका तस्बिरहरु निकै उत्कृष्ट हुन्छन् ।
२. गुगल पिक्सन एक्सएलः
यो फोनमा १२.३ मेगापिक्सेलको ब्याक क्यामरा छ जसको अपर्चर f/2.0 छ । यसमा दुई टोन भएको ड्युल एलइडी फ्ल्याश दिइएको छ । साथै, फेज डिटेक्सन अटोफोकस र लेजर अटोफोकसजस्ता सुविधा पनि दिइएको छ । जसका कारण दिउँसो खिचिएका तस्बिरहरु निकै शानदार हुन्छन् । विशेष कुरा के छ भने अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहुँदा पनि यसले हल्लिरहेको भिडियोलाई राम्रो तरिकाले स्थिरमा राख्न सक्छ ।
सामसङ ग्यालेक्सी एस सेभेन एजः
सामसङको नयाँ फोनमा १२ मेगापिक्सेलको ब्याक क्यामरा राखिएको छ । यसका साथै यसमा लेड फ्ल्यास पनि दिइएको छ । यसमा ड्युल पिक्सेल प्रविधि पनि छ । यसको अपर्चर f/1.7 हो जसमार्फत प्रयोगकर्ताले शटर स्पिड आइओएस भ्यालुलाई आफै नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।
मोटोरोला मोटो जेडः
सन् २०१६ मा सार्वजनिक भएकमो मोटोरोला मोटो जेड फोनमा १३ मेगापिक्सल क्यामरा दिइएको छ । यसमा लेजर अटोफोकस, ओआईएस र ड्युल लेड फ्ल्यास छ । यसको क्यामराले चाँडै नै फोकस गर्दछ र यसको शटर स्पिड पनि फास्ट छ । यसबाट खिचिएका फोटोहरु निकै उत्कृष्ट आउँछन् । क्यामरा एपमा अटो एचडीआरजस्ता थुप्रै फिचर्स दिइएको छ । यसमा प्रो मोड पनि छ जसले आइएसओ लेभल र वाइड ब्यालेन्स आदि सेट गर्ने अप्सन दिन्छ ।
वान प्लस थ्रीटीः
भर्खरै लञ्च भएको वनप्लस थ्रीटीमा १६ मेगापिक्सल ब्याक क्यामरा छ जसको f/2.0 अपर्चर छ । यो ओआईएस र एचडीआर जस्ता विशेषता दिइएको छ । यसको सफ्टवेयरलाई कम्पनीले यस्तो बनाएको छ कि जसका कारण फोटो निकै नेचुरल आउँछ । उत्कृष्ट तस्बिरका लागि यसलाई प्रयोगकर्ता आफैंले पनि क्यामराको विशेषतामा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । कम लाइटमा पनि यसले निकै उत्कृष्ट तस्बिर खिच्ने क्षमता राख्छ ।
नुबिया जेड११ मा १६ मेगापिक्सेलको ब्याक क्यामरा छ जसको f/2.0 अपर्चर छ । यसमा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन र पीडिएएफ राखिएको छ । यसमा ड्युल लेन्स सेटअप लगाइएको छ । राम्रो फोटोग्राफीका लागि यसमा थुप्रै सुटिङ मोड दिइएको छ । यसमा इलेक्ट्रिक अपर्चर नामको एउटा विशेष मोड पनि दिइएको छ ।
ह्वावे पीनाईनमा ड्युल ब्याक क्यामरा राखिएको छ । लिइकासँग सहकार्य गरेर यसको सेटअपको निर्माण गरेको छ । एउटा क्यामरा कलर फोटो खिच्न भने अर्कोले श्यामश्वेत । क्यामरामा एक विशेष मोड पनि दिइएको छ । यसबाट मोनोक्रोम शट निकै उत्कष्ट आउँछ । कम प्रकाशमा पनि यसले राम्रा तस्बिर खिच्ने गर्दछ ।
जियोमी माइ फाइभः
शाओमी माई फाइभमा १६ मेगापिक्सेलको ब्याक क्यामरा र ड्युल टोन लेड फ्ल्याश राखिएको छ । यसमा पिडिएएफ र ४–एक्सिस ओआईएस छ । यसको ब्याक क्यामराले निकै उत्कृष्ट तस्बिर खिच्छन् ।
एचटीसी टेन मा १२ मेगापिक्सेल अल्ट्रापिक्सल टु क्यामरा राखिएको छ जसको पिक्सेल साइज १.५५ युएम छ । अर्थात् यसले एक शटमा धेरै लाइट लिन्छ । यसमा प्रो मोड छ जसमा ह्वाइट ब्यालेन्स, आइएसओ, शटर स्पिड, एक्सपोजर र म्यानुअल फोकसजस्ता सेटिङ गरिन्छन् । क्यामरा एप निकै सजिलो छ । यसमा एटो एचडीआर, एचटीसी जोन, हाइपरल्याप्स र स्लो मोसनजस्ता विशेषता छन् ।